XyBo: စစ်မှန်သော အောင်မြင်မှု
အမြဲတမ်း အနာဂါတ်ကိုဘဲ ဦးတည်ပြီး ဘ၀လမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်။ သူက ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ငွေကြေးချမ်းသာမှုနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလို့ သတ်မှတ်ပြီး သူသတ်မှတ်ထားသလို သူကိုယ်တိုင်ဟာလည်း လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို ဦးဆောင်နိုင်သူတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ သူ့ဟာ သူ့ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အချိန်လေးတွေကို အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့သာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အချိန်တွေကြာလာတာနဲကအမျှ သူရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေကုန်ဆုံးပြီး လူလတ်ပိုင်းကို ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ လေညှင်းခံဖို့ မြစ်ကမ်းနားကို လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ မြစ်ကမ်းနံဘေးကို ရောက်တော့ သူ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ငါးမျှားနေတာကို လှမ်းတွေ့လိုက်တယ်။ အဲဒီလူငယ်လေးဟာ မြစ်ရေပြင်ကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ သူက စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ဒီလူငယ်လေးဟာ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အချိန်တွေကို အလကား ကုန်ဆုံး နေပါလား ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ သူ ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ တစ်မိနစ် တစ်စက္ကန့်ကိုတောင်မှ အလကားမဖြစ်အောင်နေခဲ့တဲ့ အတွက် ဒီလူငယ်လေးဟာ သူ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ အလကား အချိန်ဖြုန်းနေသလို မြင်နေတော့တာပေါ့။ ပြီးတော့ သူဟာ လူငယ်လေးနားကို သွားပြီး စကားသွားပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့။
"နေပါဦး..ဒီလောက်ရာသီဥတု ကောင်းနေတာ ဒီမှာ လာပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲကွယ့်..."
"ဦး မြင်တဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော် ငါးမျှားနေတာပါ..."
"ဒီလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာ ဒီ့ထက် တန်ဘိုးရှိပြီး စတိုင်လ် ကျစေမယ့် အလုပ်တွေကို ပိုပြီး မလုပ်သင့်ပေဘူးလား.."
"ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ငါးမျှားရတာကို ကြိုက်တယ်လေ... ငါးမျှားရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေးချင်တာတွေကို တွေးလို့ရတယ်လေ... ပြီးတော့ မိလာတဲ့ ငါးတွေကိုလည်း ရောင်းစားလို့ရသလို ညနေစာအနေနဲ့ချက်စားလို့လည်း ရတယ်လေ.."
"ဒီ့ထက်ပိုပြီး တွက်ခြေကိုက်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို လုပ်ဘို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလားကွဲ့... အလုပ်တစ်ခုဝင်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံရှာတာမျိုးပေါ့..."
"ကျွန်တော်က ဘာကြောင့် အဲဒီလို အလုပ်မျိုးကို လုပ်ကို လုပ်ရမှာလဲဆိုတာ ဦး ကျွန်တော့ကို ပြောပြလို့ရမလား.."
"ကြိုးကြိုးစားစားသာလုပ်မယ်ဆိုရင် အမြင့်တနေရာကို ရောက်နိုင်လို့ပေါ့..."
"ဒါဆို အမြင့်တနေရာကို ရောက်ရင် ဘယ်လို ကောင်းကြိုးတွေ ခံစားနိုင်မလဲ.."
"အဲဒီ့အချိန်ကျရင် မင်းလုပ်ချင်တာမှန်သမျှ အားလုံး လုပ်လို့ရပြီလေကွာ.."
သူက ဒီလိုလည်း ပြောရော ကောင်လေးက ရီတော့တာဘဲ။ ပြီးတော့ သူ့ကို ဒီလို ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
"အဲဒီ့လို ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ အခုလိုမျိုးလား ဦး...တနေကုန် ထိုင်ပြီး ငါးမျှားနေရတာမျိုးပေါ့..."
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တယောက် မတူညီတဲ့ အနာဂတ်အိပ်မက်တွေကို မက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အရသာနဲ့ အောင်မြင်မှုရဲ့ အတိုင်းအတာကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူကြပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်က ဘာကို တကယ်လိုလားတယ် ဆိုတာကို သေချာမသိဘဲ စွတ်ပြေးနေတာမျိုးလည်း တခါတလေမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်ကို ရောက်ဖို့ တည့်တည့်မတ်မတ် သွားနေတယ်လို့ထင်တဲ့ ဒီလမ်းကလေးဟာ ကွေ့ပတ်ပြီး သွားနေတာ ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့ တခါပြန်ပြီး ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ်တိုင် ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ လိုလားတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတာမျိုး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။
This entry was posted on Thursday, August 07, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can leavearesponse and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .
Filed under ဝတ္ထုတို
၀တ္ထုလေးရဲ့ရသနဲ့မဆိုင်ပေမယ့် ငယ်ငယ်ကပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ငါးမျှားဖူးတာလေးပြောပြပါရစေ။ ရေကန်ထဲကငါးကိုမိတဲ့အချိန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်မိခဲ့ပေမယ့် သေချာကြည့်လိုက်တော့ ငါးမျှားချိတ်တန်းလန်းသွေးသံရဲရဲနဲ့ရုန်းကန်နေရှာတဲ့ ငါးလေးကို သနားစရာတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီး ငါးမျှားတဲ့အလုပ်ကို တသက်တာစွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
မှတ်ချက်။ သေပြီးသားငါးကိုတော့ စားပါတယ်။
ကောင်းတယ်ဗျာ.. .. ဒီလိုမျိုးလေးတွေ များများရေးပေးပါ... လာဖတ်နေလျက်ပါ...